नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : देश फेरी भुमरीमा : लौन पशुपतिनाथ कृपा गर !
देश फेरी भुमरीमा : लौन पशुपतिनाथ कृपा गर !
जनताले सर्वाधिक आशा गरेको, पहिला दुई तिहाइको र हाल दुई तिहाइ नजिक रहेको नेकपाको ओली सरकार इतिहासकै हुतिहारा र पूर्णरुपमा असफल साबित भए पछि विकल्प खोजिरहेका छन् जनता । पहिले नै असफल भैसकेको काङ्ग्रेस, रा.प्र.पा, मधेसवादीहरू विकल्प हुन सक्दैनन् । ओलीको गमन पछि अहिले आउन सक्ने भनेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथहरु हुन जो पहिलै प्रधानमन्त्री भएर फेल भैसकेका पात्रहरू हुन । ओली
गएर यिनीहरू आउने कुराले जनतामा आशा भर्ने ठाउँ छैन । राजा पूर्व भैसकेका छन् । रबिन्द्र मिश्र देखी थुप्रै जनताले खोजे जस्तो विकल्प बन्न सकिरहेका छैनन् । राजनीति गोलमाल भो अन्तरे भने जस्तै भएको छ । बिना नेता, बिना नेतृत्व पनि जनताले सडक कब्जा गर्न थालेको स्थिति छ । भारतको दादागिरी सबैले देखिरहेका छौँ । कोरोनाले यही बेला नेपालमा राज गरिरहेको छ । लकडाउनमा मात्र आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या पन्ध्र सय हाराहारी पुगेको छ । देश अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अराजकतामा चुर्लुम्म डुबेको छ । अबको केही महिना पछि भोकमरीको सम्भावना देखिंदैछ । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको मात्र होइन बेसी पुगिसकेको छ । नेपाल आमाको चीरहरण भइरहेको छ । बाहिरी देशबाट कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेर फर्किने लाखौँ लाखको लर्को देखी देश भित्रै पिल्सिरहेको लर्को मिसिएर अर्को आँधी बेरी सिर्जना हुने अवस्था छ । देश फेरी अर्को भुमरीमा पर्ने देखिंदैछ । उता नयाँ दिल्लीले १२ बुँदे मार्फत सिंहदरबार छिराएकाहरूसँग आगो छ । सुनिंदैछ दिल्लीमा नयाँ सरकारको खोजी भइरहेको छ । कुनै सकारात्मक कुरा देख्न नपाएका जनता राजेन्द्र महतोको भाषणमा ताली मार्ने अवस्थामा पुग्दैछन । आखिर जे सुकै भए पनि देश फेरी भुमरीमा फसेको छ । अब के हुन्छ ? पर्ख र हेर भन्दा बाहेक कसैसँग उत्तर छैन । एउटा आस लाग्दो नेतृत्व जन्मिएन वा जन्मिएको भए पनि अगाडि आउन सकेन त्यही नै देशको लागि दुर्भाग्य भयो । देशको लागि गुहार लाउने पशुपतिनाथ बाहेक अर्को कुनै ठाउँ छैन । कठै हामी निरीह जनता, कठै मेरो देश ! लौन आशा लाग्दा कोही अगाडि आऊ, असङ्गठितहरूलाई सङ्गठित गर्दै देशका लागि केही गर । लौन पशुपतिनाथ कृपा गर ।